Bryansk Field Day ga-ẹkenịmde ke ufọt ufọt July - nduku System Magazine
A ga-eme ụbọchị Ubi Bryansk n'etiti Julaị
в Ọkwa, News, Akụkọ mpaghara
A ga-eme ememme Bryansk Field na Julaị 15 na 16 na Kokino, dabere na Mahadum Bryansk Agrarian. pịa ọrụ nke Ministry of Agriculture of Russia. Emere ihe omume ahụ iji mepụta ọnọdụ maka mmepe nke ọrụ ugbo na mpaghara Bryansk, guzobe mmekọrịta bara uru, gosipụta ụdị ọhụrụ, teknụzụ mmepụta, ịkọ ihe na nhazi nke ngwaahịa ugbo.
Mkpokọta mpaghara n'okpuru ihe ọkụkụ na ala ngosi ga-abụ hectare 80, ma ekenyela saịtị iji nweta ihe ngosi ngosi nke nwere ebe karịrị hectare 20.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, a na-akụ ụdị ihe ọkụkụ 47 dị iche iche: ọka wit oyi, rye, triticale na mkpuru oyi.
N'oge opupu ihe ubi, a na-ebute mkpụrụ nke ihe ọkụkụ nke oge opupu ihe ubi. N'ihi ya, a ga-egosipụta ihe karịrị ụdị 260 nke ụdị na ngwakọ ndị a na-akọ na mpaghara ahụ, gụnyere ihe karịrị ụdị poteto 80, n'ọhịa. A na-anọchi anya ụdị ọgbara ọhụrụ na ndị na-ekwe nkwa site na ebe a na-azụ ụmụ na ndị otu onwe. Ihe ọkụkụ nke ụlọ ọrụ ugbo dị n'ebe karịrị hectare 20.
N'oge mmemme ahụ, a ga-egosipụta ahụmịhe na usoro ọhụụ na ọrụ ugbo. N'ime usoro ihe ngosi ahụ, a ga-egosipụta ụdị ígwè ọrụ ugbo dị iche iche, mmepụta ihe ọkụkụ ọhụrụ na teknụzụ ugbo. A ga-egosipụtakwa ịkọ ala, iweta ahịhịa, nchebe ahịhịa na ihe ndị ọzọ.
Tags: Bryansk mpagharaụbọchị ubimkpụrụ nduku
GRIMME Technica: mmezu na atụmanya ya
Ewi ojii nwere isi ojii na-eri ihe ọkụkụ na ọka n'ubi na mpaghara Chita